मस्तिष्क कालो नबनाउनुस, बलात्कार अरिङ्गाल हैन, कानुन अयोग्य हो – रुकु बस्नेत – www.agnijwala.com
मस्तिष्क कालो नबनाउनुस, बलात्कार अरिङ्गाल हैन, कानुन अयोग्य हो – रुकु बस्नेत
२७ आश्विन २०७७, मंगलवार ११:४५
“फलानो ठाउँ मा एउटा बालिका बलात्कार पछि हत्या भयो रे”, “एउटा हजुरआमा को नि बलात्कार भयो रे” ‘अब त आफ्नै घर मा दाजुभाईबाट बलात्कार भयो रे’ हो ! यस्तै यस्तै घटना को समाचारबाट सुरु हुन्छ, आजकल दिन हरु ।
अनि सोच्न बाध्य हुन्छु । आखिर समाज कता तिर जादैछ ? आखिर कहिले सम्म अकाल मा ज्यान गुमाउन पर्ने ? कैले सम्म हामिले बाटो मा हिड्दा सुरक्षित महसुस गर्न न पाउने ?
दिनप्रती दिन हामी मन मस्तिष्क मा डर बोकेर कैले सम्म हिड्ने ? महिलाले लगाउने छोटो कपडाले गर्दा बलात्कारमा प्रोत्साहन मिल्छ, भन्ने कुरा सुनेर विरक्त्त लाग्छ मलाई ।
तिमीले लगाउने “हाफ पाइन्ट र गन्जी” अनि हामीले लगाउने “हाफ पाइन्ट र टि-सर्ट” मा के फरक छ । भन्देउ मलाई ? बिचरा त्यो नाबालिकालाई बुर्खा लगाएर राख्ने ???
छोटो लुगाले तिमीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्छ । भने बलात्कार शून्यमा झर्छ, भन्ने कसम खाउ म बुर्खा लगाएर हिड्न पनि तयार छु।
“महिलाको छोटो कपडालाई दोष दिनु भन्दा पहिले आफ्नै बिग्रिएको मानसिकतालाई बदलौँ र बलात्कारीलाई यस्तो सजाय देउ सरकार जुन सजाय देखेर आउदा दिनहरुमा त्यस्तो सोच्नेहरु को मुटु कामाेस र भनाेस कि याे देश बलात्कारीकाे हैन ।”
यति गर्न सक्दैनौ‌ ! भने बलात्कारीलाई जनताको जिम्मा लगाइदेउ तिनको फैसला जनताले गर्नेछन। अहिले दिनमा ५ / ६ वटा बलात्कारको घटनाहरु घटिरहेका छन । अझ थाहा न भएको त अनगिन्ती घटना होलान।
तर यस्तो घटना हुँदा पनि सरकारले कानुन परिमार्जन गरेर बलात्कारीलाई हदै सम्मको कार्बाही दिन किन सक्दैन ?? “बलात्कारले भै सक्यो धेरै क्षति, के गर्दै हुनुहुन्छ ! महिला राष्ट्रपती” ???
सम्पुर्ण पुरुष समुदायले बलात्कार गर्दैनन । बिकृत सोच भएका व्यक्तीहरुले बलात्कार गर्छन,
तिनीहरु बलात्कारी हुन। बलात्कार सम्बन्धी कानुन कडाइका साथ लागू गर्न र कानुन परिमार्जन गर्न सरकारलाई मेराे सुझाव छ । अब त अत्ति भै सक्यो।
दिन प्रतीदिन बढी रहेको बलात्कारको घटनामा सम्पुर्ण पुरुष समुदाय बलात्कारी होइनन। खराब र बिकृत फैल्याउने मानसिकता भएको व्यक्ती र तिनका झुण्डहरुको कारण बलात्कार घटना बढी रहेको छ।
अहिले सामाजिक संजालमा खुलेआम म बलात्कारी हुँ , मैले बलात्कार गर्छु , मलाई कसैले सजाय दिन सक्दैन भन्दै हिड्ने गरेकाे अराजक झुण्ड छ । यस्ता झुण्ड वा समुहलाई समेत प्रतिबन्ध नगर्ने हाे भने बलात्कारका घटना कहिले राेकिदैन्न ।